I-yKey ye-Mac - # 1 Uhlelo Lokusebenza Lokuzenzakalela Kwezenzo Eziphindaphindayo | I-Plum Amazing
yKey for Mac - # 1 App For Automation Yezenzo Eziphindaphindwayo
Okusheshayo: 12 / 28 / 21
Dinga: IMac 10.9-11.4
yKey Mac App - Okokuzenzakalela kwezenzo eziphindaphindwayo ku-Mac OS. Ukushintsha ukuze wonge isikhathi.
Susa umsebenzi ongenangqondo! Shintsha izenzo eziphindaphindwayo ku-Mac. Noma ikuphi ukulandelana kwezenzo (chofoza, thepha, thayipha, uhudule, uvule, uvale, ama-apula, njll) kungafakwa kusinqamuleli esingaqaliswa yi-hotkey, imenyu, isibali sikhathi, umcimbi noma i-USB. Yonga isikhathi, ukuthayipha namakhulu wokuchofoza nsuku zonke. Gwema umhubhe we-carpal. Yenza okuncane futhi ufeze okuningi. Ibhukwana ngu U-Adam Engst.
Zikhulule ngokwakho ebholeni naseketangeni lobunzima bokuphindaphinda. Sebenza ngobuhlakani, susa ukusebenza kanzima nokugigitheka, ungabe usaba yisigqila.
"Isoftware engiyithandayo ye-Mac yiYKey." - Ukubuyekezwa nguDavid Pogue, I-New York Times
I-yKey ye-Mac - # 1 Uhlelo Lokusebenza Lokuzenzakalela kwenani lezenzo eziphindaphindwayo
Yenza Okuncane Ukufeza Okuningi
U-Adam C. Engst ungumbhali weManuwali “Thatha Ukulawula kweYKey”. Ibhukwana lakhe likusiza ukuthi ufake i-yKey futhi linikeze isifundo ngesinyathelo ngesinyathelo sokusebenzisa le software ebalulekile ye-Mac automation.
U-Adam uqale incwajana yeTidBits futhi ubhale izincwadi eziningi zobuchwepheshe, kufaka phakathi uchungechunge lwe-Internet Starter Kit oludayiswa kakhulu, kanye nezindatshana eziningi zemagazini.
Mashi 2013 Isifundo “Kusetshenziswa i-Ableton Live nge-yKey”
Isifundo esijulile sikaFran Cotton sikhombisa ukuthi kungani i-yKey ibalulekile ekusebenziseni i-Ableton Live 9. Lokhu kubalulekile uma usebenza futhi uchitha isikhathi esiningi ngomsindo. Kufaka isaphulelo se-yKey. Amasu amaningi we-Ableton Live neYKey lapha.
Isifundo sikaBen Waldie isingeniso esihle ku-yKey njenge-automation / software ye-macro.
Ukubuyekezwa nguDavid Pogue, New York Times
UDavid Pogue uxoxa nge-automation / macro software futhi kuvidiyo yakhe yamasonto onke uthi yKey uyintandokazi yakhe.
Ukubuyekezwa kweMac-Guild.org kunikeza i-yKey 4.5 kumagundane ama-5
“Selokhu ngaqala ukusebenzisa i-yKey, leli gugu lingisindise kwaze kwaba yihora ngesonto ngisebenzisa izinqamuleli. Kukonke, ngithole ukuthi i-yKey ithembekile futhi kulula ukuyisebenzisa. Kulabo abafuna isixazululo esingabizi sokwenza izinqamuleli ku-Mac OS X, ngincoma kakhulu ukuthi ngibheke i-yKey. ” - UJames Richvalsky
Isebenza I-KeyCue okunikeza ukufinyelela okusheshayo kuwo wonke ama-hotkey akho.
Ingabe uyisigqila sekhompyutha yakho?
Siyawathanda amakhompyutha ethu, kepha sonke sijwayele ukukhathala kwemisebenzi ephindaphindwayo. Siyazi ukuthi amakhompyutha akwazi ukubhekana nokubuyiselwa kwemali, kepha bekungekho ndlela elula, kuze kube manje ukuwaqoqa bese ukuhambisa kukhompyutha ukuthi ikwenze. Manje, ngenhlanhla kwi-Mac kukhona yKey. Zikhulule ngokwakho ebholeni naseketangeni lobunzima bokuphindaphinda. Lawula ikhompyutha yakho, ungabe usaba yisigqila, sebenzisa Ukuzenzekelayo okuyisisekelo kwe-mac.
Isibonelo esilula sendlela i-yKey engonga ngayo isikhathi sakho!
Ithi uvula iSafari nsuku zonke bese uya kumawebhusayithi afanayo ayi-8 bese ukopisha umbhalo othile owuthumela i-imeyili kothile. Esikhundleni sokwenza lo msebenzi ofanayo usuku ngalunye imizuzu eyi-15 ngokuthayipha nokuchofoza nokuvula nokuvala izinhlelo kwenze ngeYKey nge-hotkey eyodwa noma ngento yemenyu bese uyivumela ukuthi isebenze ngemuva ngenkathi wenza omunye umsebenzi noma uphuza itiye. Ngokuzimisela, kungani unikele ngempilo yakho ezenzweni eziphindaphindayo ezingathandeki lapho ikhompyutha yakho ingakwenzela zona.
Yenza okuncane futhi ufeze okuningi nge-yKey.
i-yKey ingeza into ebalulekile kepha engekho ku-Mac OS X, ezishintshayo! YKey izokusindisa kanye nenkampani yakho isikhathi esiyigugu namandla. Konke mayelana nokusebenza kahle, sikubiza lokhu ngokuthi "ukwenza okuncane nokufeza okuningi." I-yKey ingaguqula isenzo esithile esiphindaphindayo esingahle sibe nezinkulungwane zokuchofoza kwegundane (kuzicelo ezahlukahlukene, kumamenyu nakumabhokisi engxoxo ahlukahlukene) namakhasi wokuthayipha kusinqamuleli esisodwa se-yKey esingaqaliswa noma kunini ukwenza isenzo esifanayo ngqo ngokucindezela ukhiye olulula . Funda kabanzi ngezinqamuleli kusigaba sethu sokubuka konke.
Ukubuka konke nokuzenzakalela
I-yKey iyinsiza ezisebenzelayo, uhlelo olwakha izinqamuleli ukufeza imisebenzi ephindaphindwayo. Empeleni, isinqamuleli se-yKey wuhlelo oluncane uqobo lwalo, kepha awudingi ukwazi into yokuqala ngohlelo lokwenza isinqamuleli se-yKey. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuhlanganisa izingxenye ezintathu ezidingekayo zesinqamuleli: Umyalo owodwa noma eminingi enikeza isinqamuleli ukusebenza kwayo, umongo lapho isebenza khona, kanye nesiqalisi esichaza ukuthi isinqamuleli sisebenza kanjani.
Isinqamuleli sakhiwe izingxenye ezintathu:
Umyalo isenzo, noma uchungechunge lwezenzo, ofuna i-yKey yenze. Isibonelo somyalo sithi: Vula i-Photoshop bese uqala idokhumenti entsha. yKey ingavula imenyu bese ukhetha izinto zemenyu. Ingabamba futhi isebenze imibhalo ye-Apple kusuka kuphalethi. Shintsha ukunyakaza kwegundane ukuze uthephe izindawo zesikrini kuhlelo lokusebenza. Ingasebenza kufayela le-
Umongo uvela lapho isinqamuleli sakho singenziwa sisebenze khona. Ngokuvamile umongo usethelwe endaweni yonke ukuze uzosebenza noma ngabe ukuluphi uhlelo okulo. Kodwa-ke ungafisa ukusetha i-hotkey ukuze isetshenziswe kuphela ku-Photoshop, kulokhu umongo uzosethwa ku-Photoshop. YKey isebenza ngaphakathi naphakathi kwazo zonke izinhlelo zokusebenza.
Isiqalisi yiso esenza kusebenze isinqamuleli sakho. Imvamisa kungumcimbi oshisayo noma wesikhathi sosuku. Isibonelo qala i-Safari ngokucindezela izinketho + noma uzilayishe ngo-8: 00 ekuseni njalo ekuseni.
Sebenzisa i-yKey ukutshela ikhompyutha yakho ukuthi ivule, ishintshe, ikhombise, iyeke futhi ivule izinhlelo zokusebenza zesoftware, noma ivule amadokhumende athile nakwezinye izinhlelo ngaphandle kohlelo lomdali. Kubandakanya ukufinyelela kuzinhlelo zokusebenza zakamuva nezinhlelo zokusebenza ezisebenzayo njengamanje. I-yKey ikwazi ngisho nokulawula amawindi uqobo namamenyu wokusebenzisa okusebenzayo.
'Inketho' + 'g' ingiyisa kuGoogle ewindini elisha. 'Option' + 's' ilayisha iSafari noma iletha iwindi lakamuva kakhulu ngaphambili. 'Option' + 'p' ivula i-Photoshop (noma noma yiluphi uhlelo lokusebenza olikhethayo) bese ivula idokhumenti entsha. Ukushintsha phakathi kwezicelo akukaze kube lula futhi kusheshe kangaka.
Uhlu lwami lomsebenzi alupheli. Ekuqaleni kosuku kulayisha njengengxenye yokulandelana, kanye ne-imeyili yami, cnn.com, nezinto ze-ebay ebengizilandela. Ukubheka uhlu lwami emini, ngivele ngicindezele u-'inketho '+' shift '+' t 'bese iza ngaphambili kudeskithophu yami.
Ukufomatha amadokhumenti kungaba yisidina. Ungaba namafonti amaningi, osayizi, imibala, nokulungiswa kokuqondanisa. Ngisebenzise i-yKey ukusetha ama-hotkeys, asebenza kuphela ngaphakathi kwe-MS Word, ehlehlisa ukufometha kwami.
Ibhodi lokunamathisela, iwindi, isistimu, ne-UNIX
Ukukopisha, Ukunamathisela nokungeza kubhodi yokunameka konke kungenzeka ngeYKey. yKey ingavula Okuncamelayo Kesistimu bese ishintshela kunoma yikuphi okukodwa kokuthandwayo. I-yKey ingatshela ikhompyutha ukuthi ilale nini, iqale kabusha noma icishe. Usebenzisa amandla we-Mac OS X, i-yKey ingakhipha imiyalo ye-UNIX.
Ngisebenzisa i-yKey ukwenza isipele i-hard drive yami ngenkathi ngilele. Kepha uma sekuphelile, ngithanda ukuthi ikhompyutha yami iye kolala ukuze ngonge amandla. I-yKey ingakunakekela konke lokhu, yeka ucezu oluguqulwayo lwesoftware!
Kuhle kakhulu ukubona ukuthi amawebhusayithi wami abukeka kanjani kuma-setups nezikrini zamakhompyutha ezahlukahlukene. Ukulungisa okuncamelayo kohlelo njalo lapho ngenza lokhu kuyadina. Manje sengingakwazi ukushintsha lokhu ukushintshela emuva naphambili ngokuchofoza okukodwa.
Ikhibhodi, iMouse, Imenyu, ne-Palette
I-yKey ingalingisa yomibili imicimbi ye-keydown nemicimbi yegundane, okusho ukuthi i-yKey ingalawula ikhompyutha kube sengathi othile usebenzisa ikhibhodi negundane ngokomzimba. Imiyalo yekhibhodi ifaka phakathi amandla wokuthayipha usuku, thayipha okuqukethwe ebhodini lokunameka noma nokuqukethwe yifayela.
KuFlash MX ayikho i-hotkey yokufaka ifreyimu kusendlalelo. Ngokuphikisana nokusebenzisa igundane isikhathi ngasinye ukwenza lokhu, ngisebenzise i-yKey ukuze ikhethe 'ukufaka ifreyimu' kwimenyu lapho ngike ngicindezele u-'inketho '+' 'shift' + 'f'. Ngisetha umongo ukuze usebenze ngaphakathi kweFlash kuphela, ukuze lo khiye utholakalele ezinye izinhlelo zokusebenza.
Ukulayisha amafayela kuseva yami kungaba yisidina, ikakhulukazi lapho ngisebenzisa i-PHP, edinga ukuthi ngihlele kaningi, ngilayishe futhi ngivivinye. Isoftware ephephile ye-FTP engiyisebenzisayo idinga ukuthi ngidonse amafayela kumtholi wami ukuze ngilayishe. Ngibeke isinqamuleli ku-yKey ukuze kuthi lapho ngishaya u-'ctrl '+' shift '+' u ', ikhompyutha yami ivule isitholi neklayenti lami le-ftp, bese ilingisa ukunyakaza kwegundane okudingekayo ukuhlela amafayela ngokusho kosuku bese idonsa amafayela eklayenti lami le-ftp ukuze alayishwe.
yKey Isebenza Ngayo Yonke I-Hardware ye-USB Ebhalwe Ngezansi
i Amakhibhodi okhiye
I-Intanethi, Iskripthi, nomsindo
I-yKey futhi iyakwazi ukuvula Amakheli eWebhu, Yakha ama-imeyili amasha, Misa isikhashana, ibonise ukulawulwa kwefolda bese ukhombisa amafayela ngaphakathi kwe-Finder, dlala Imisindo, futhi usebenzise ama-Applescript noma uqobo lwayo luqhutshwa yi-Applescript. Dala ama-palette angaba noma kuphi kusiqaphi sakho ngezinkinobho ezikuvumela ukuthi usebenzise imibhalo ye-Apple ngokucindezela inkinobho.
Ukugcina umkhondo wabancintisana nabo, izindaba zezimboni, kanye nezinga lethu lenjini yokusesha kubalulekile enkampanini yethu. Kulokhu ngisebenzisa izexwayiso zeGoogle, ithuluzi elimangalisayo ngokwalo. Kepha okumangalisa kakhulu ukuthi ngenze ngokwezifiso i-yKey ukuthumela ngokuzenzakalela isexwayiso ngasinye esifanele se-Google kubo bonke ozakwethu. Engangikuchitha ihora ngosuku ngikwenza, manje sekwenziwa ngokwakho.
Ngisebenzise i-yKey ukungixwayisa ngemisindo ehlukahlukene kuye ngemisebenzi esesandleni. Uma ngiba nengqungquthela ye-iChat ngehora leshumi nambili ekhalendeni lami, khona-ke uYKey uzodlala umsindo wecilongo, avule iChat, futhi angixhume kubaphathi bami.
IMac-Guild.org inika amagundane ama-yKey 4.5 kwangu-5
“Selokhu ngaqala ukusebenzisa i-yKey, leli gugu lingisindise kwaze kwaba yihora ngesonto ngisebenzisa izinqamuleli. Kukonke, ngithole ukuthi i-yKey ithembekile futhi kulula ukuyisebenzisa. Kulabo abafuna isixazululo esingabizi sokwenza izinqamuleli ku-Mac OS X, ngincoma kakhulu ukuthi ngibheke i-yKey. ”
- UJames Richvalsky Funda isibuyekezo sonke
UMichael Hyatt - Ubuholi bamazwe omhlaba 7/5/11 Uchaza ukusebenzisa kwakhe iYKey ukukhulisa umkhiqizo.
Okushiwo Abasebenzisi Bethu
"Ngaphandle kwesoftware yakho izinsuku zami zokuphendula imibuzo engapheli yama-imeyili bezingaba yisidina ngokuphelele - Ngiyabonga ngokungikhulula kwemisebenzi ephindaphindwayo"
UBrent Hohlweg, Amadoda eKilts
“Okokuqala, ngithanda ukuthatha leli thuba ukusho ukuthi i-IMHO umkhiqizo wakho yKey umane nje ungusizo oluhle kakhulu lokukhiqiza olutholakalela i-OS X engithole kulo kuze kube manje. Kuyisixhumi esibonakalayo nokufinyelela kuzici kulula kakhulu futhi kwenziwa kahle ukuthi onyakeni noma engikade ngikusebenzisa angikaze ngibe nesidingo sokuvula amafayela osizo ukufeza umsebenzi owufunayo. Okokufundisa nokubuka konke okwethulwe muva kusifanele isikhathi sokuqalisa futhi sisebenze njengesibonelo esihle kakhulu samandla nekhono le-yKey. Njengomphathi wohlelo noMqambi weFayileMaker ngisebenzisa i-yKey kuzo zonke izingxenye zomsebenzi wami, ukusuka ekuhambeni nje nokulinganisa amawindi kuzinqamuleli zemenyu nokufaka umbhalo ophindaphindwayo nokusebenzisa imibhalo yama-apula kusuka kukhibhodi. Njengamanje nginezinqamuleli ezingaphezu kwekhulu ezingama-50 kusethi yami yendawo yonke futhi enye engama-40 noma ngaphezulu isabalale phakathi kwengxenye yeshumi nambili yohlelo lokusebenza. Kuhlanganiswe lokhu ngisindise amakhulu emivimbo yokhiye nokuchofoza kwegundane ngehora. Ngokubambisana neLaunchBar, i-yKey ingenye yezinto ezimbili KUMELE zibe nezinsiza engizisebenzisa kaningi ngehora nsuku zonke. ”
“Le yi-Youpi Key endala, enezici eziningi * eziningi. Kuhle kakhulu! Manje iphikisana kalula neQuicKeys. ”
USherman Wilcox, uMnyango Wezilimi, Inyuvesi yaseNew Mexico
“Sisebenzisa iYKey embukisweni womnyuziyamu oseBoston Children's Museum; iyitende elikhulu elifana neBoston's Symphony Hall enesikrini sevidiyo seBoston Pops kuso. Izingane zingasebenzisa induku kagesi "ukuqhuba" i-orchestra. Kubukeka sengathi kushaywa kakhulu ngabahamba emnyuziyamu, okuyinto enhle kithi. Ungafunda ngayo kabanzi uma unakekela ku-reretheconductor.com ”
UTeresa Marrin Nakra, Umqondisi Wezobuciko, Umculo Wokucwiliswa
“Lolu uhlelo oluhle kakhulu! Kungisindisa amahora namahora wokusebenza. Ngihlala ngicabanga ngezinto ezintsha engizozenza ngayo. ”
UJames Torck, Umqambi kanye noMklami Womsindo
“Ngiyabonga ngokuxhaswa okuqhubekayo nokukhishwa okusha kwe-yKey okuqhubeka nokuba ngcono - bengisebenzisa iQuickeys eminyakeni eyedlule futhi ngijabule kakhulu ngesinqumo sami sokushintshela ku-yKey - inikeza konke engikudingayo ngenani elincane lezindleko - Qhubeka nomsebenzi omuhle!"
“Ngisebenzise i-KeyQuencer iminyaka kwi-Mac. Lapho ngishintshela ku-OS X, yayingekho inguqulo ye-OS X yayo, ngakho-ke ngazama i-Youpi Key (manje eyi-yKey). Kuyinto enhle esikhundleni. Kungisindisa amahora amaningi. Kunconywe kakhulu! ”
“YKey Rocks !!!! Umsebenzi omuhle !!!! ”
UWilliam Jamieson, iMenenja Yemisebenzi Yewebhu, iSmart Works, e-Australia
“Sengivivinye i-beta yKey isikhathi esingangesonto manje. Ngiqaphele ukuthi ibifakwe ku-VersionTracker namuhla futhi ngibonile nokuthi awuzange usho ukuthi "bekungukhiye we-Youpi ngaphambilini". Kubalulekile ukuthi wonke umuntu azi ukuthi i-Youpi Key manje isiyiKey ngoba unabalandeli abaningi be-Youpi Key! ”
UPaul Wharf, Uchwepheshe We-Web Technology, eMount Holyoke College
"Ngemuva kweminyaka eminingi, ngiyeka iQuicKeys ukuthola okuthile okulula okusebenzayo."
“Uhlelo oluhle kanjani. Ngikhuluma nje ngilula isikhwama sami semali. ”
"Ngiyabonga ngalolu hlelo lokusebenza oluwusizo kakhulu, olukhulisa kakhulu umkhiqizo."
“Sawubona bafana, Nihambe kahle ngenguqulo entsha ye-Youpi Key (yKey). Kuhle ukuthi manje sekuyifasitelana lokuthandwayo. Kuyengezwa okuhle. ”
"Siyabonga ngomsebenzi onzima wokwenza lokhu kube uhlelo oluhle kakhulu."
“Siyabonga ngokubuyekeza i-YoupiKey / yKey. Ngokushesha iba enye yezinsiza zami ezisetshenziswa kakhulu. Siyabonga ngokungeza uHide Front Application! Manje sengingakwazi ukufihla noma yiluphi uhlelo lokusebenza nge-keystroke efanayo, ngisho naseClassic. ”
Kunezibuyekezo ezingaphezulu kwezingu-108 ze-yKey ku- VersionTracker.com
Izinkanyezi ezingu-4.5 nokulanda okungama-78,500
- ukulungiswa okuqhubekayo nokubuyekezwa kwezixhumanisi zemanuwali. ukuwenza ama-https nezixhumanisi ezintsha ze-google doc manual. ingxubevange. ezinye izinto zibuyekeziwe.
- buyekeza zonke izixhumanisi zemanuwali. ukuwenza ama-https nezixhumanisi ezintsha ze-google doc manual.
- Kuhlanganiswe ku-M1 Mac kwe-Intel. Igijima kuma-Mac nge-Intel ne-M1 Macs isebenzisa i-rosetta okusho ukuthi isebenza ngokushesha kuma-M1 macs. I-Universal izofika ngokuzayo
- Kungezwe 'i-bugfix / i-darkModeContrastFixes'
- Lungisa ibha yamathuluzi ephaphathekile kwimodi emnyama kusikrini sezintandokazi
- Lungisa ukungafani kwemodi emnyama ekufakweni kombhalo we-AppleScript ngokuphoqelela umlando ongemuva we-AppleScript isitayela sentambo esishiwo ngohlelo, futhi ukuvula uhlelo lokusebenza lomhleli wesikripthi se-Apple ngemodi emnyama kukhombisa ukubuka okunezizinda ezilula.
- Lungisa imodi emnyama yombhalo omnyama ngemuva emnyama ebhodini lokunameka, umyalo kanye nabahleli bezinqamuleli ze-URL
- Susa imigqa yegridi evundlile ekubukweni kwetafula Lokhu kubukeka kuminyene impela kwimodi emnyama, futhi nakwimodi ekhanyayo ayihambisani nemibala yomugqa oguqukayo.
- Lungisa ukuphahlazeka okungahle kwenzeke ngesikhathi sokuqalisa uma izimvume ze-HID zingakanikezwa
- Izithonjana zebha yamathuluzi eliyinhloko lokuhlola lokungafani kwemodi emnyama kangcono Faka okunye okusetshenziswayo kwezithombe ezindala ikakhulukazi ngezithonjana zohlelo lwe-AppKit. Okuhlukile "kuyimpinda" engenaso isithonjana sohlelo.
- Lungisa umbhalo omnyama wemodi emnyama esimeni esimpunga esimnyama kubahleli be-run param
- Lungisa imodi emnyama yombhalo omhlophe ngemuva okumhlophe kusihleli sezinqamuleli Incazelo yokuphindaphinda yayisebenzisa umbala wangokwezifiso kunombala wohlelo.
- Lungisa umbhalo omnyama wemodi emnyama kumlando omnyama kusihleli sezinqamuleli zekhibhodi
- Misa iGit ekufuneni ukulandelela amafayela akhiqizwe endaweni, aqondene nomsebenzisi
- Susa i-Sparkle updater engapheli I-Sparkle update checkForUpdates: isetshenziselwa kuphela ukuvuselelwa okusobala okucelwe ngumsebenzisi, hhayi ukubuyekeza okujwayelekile kohlelo. Lokhu kusho ukuthi 'ukuhlola izibuyekezo' akusenzeki ekuqaleni futhi kuyacasula wonke umuntu.
* i-yKey manje inikezela ukuzihambisa ifolda yezicelo lapho ifakwa okokuqala.
* Ukuqala kokuqala manje sekuthuthukile ukuvumela izimvume ze-MacOS zinikezwe.
* Ukubuka okuthuthukisiwe kubonisiwe ngenkathi kuqala ukusebenzisa i-yKey.
* Ilungisa izimbungulu ekuqaliseni kabusha lapho ungena ngemvume.
* Isicelo sesici: Umhleli we-yKey manje wethula ngokuzenzakalela i-yKey Engine uma injini ingasasebenzi kakade.
* Ngivuselele uhlu oluceliwe lwezimvume zezinguqulo zakamuva ze-MacOS.
* Lungisa isiphazamisi ngokubhalisa nge-URL.
* Isimanjemanje sesici sokuvuselela izaziso.
* Lungisa isiphazamisi lapho kunwetshwa iphaneli ewile.
* Isithombe semenyu esizenzakalelayo se-yKey sisebenza kangcono kumodi emnyama. Ungahle udinge ukusetha amamenyu akho akhona ukuze usebenzise inketho ethi "Njengemodi yemodi emnyama".
* Bheka izibuyekezo manje ziyasebenza ukulanda nokufaka uhlelo lokusebenza.
* Kuhlanganiswe ne-xcode 10.3 yakamuva
* Kwaziswe ngethuluzi lokuphepha lakamuva le-apula
[lungisa] Lungisa ukuphahlazeka okubi okwenzeka kuzinguqulo zakamuva ze-macOS lapho i-plugin yKey izama ukubonisa umlayezo.
[mod] Thuthukisa ukubonakala kwemenyu kumodi emnyama. Izithonjana zemenyu zithathwa njengezithombe ze-template, ezisebenza ngemodi emnyama. Uma unesithombe esigcwele umbala, udinga ukukhetha inketho yesifanekiso semodi emnyama yaleso sithonjana kusihleli se-yKey.
[mod] Yenza i-URL yokuvuselela i-Sparkle ikhombe endaweni ejwayelekile kusayithi likaPlum Amazing.
[fix] Kungezwe ezinye izinguqulo ezingekho.
[lungisa] Lungisa ukugqwayiza kwewindi okuqale / okuphele endaweni engafanele
[lungisa] Vimbela ukuphahlazeka lapho kwenzeka khona imicimbi ethile yekhalenda (kuvame ukubonakala njengokuphahlazeka lapho kuvuswa noma ukuphahlazeka lapho kuvulwa isikhashana).
[fix] Khulisa usayizi wemiyalo yewindi manje sebenza futhi ngezinguqulo zakamuva ze-MacOS.
[lungisa] Lungisa ezinye izimbungulu zokuskrola evundlile futhi ngokuvamile wenze izenzo zokupheqa iwindi zithembeke kakhulu.
[lungisa] Lungisa ezinye izinkinga zesithombe kusihleli se-yKey, ikakhulukazi lapho ezinye izithombe zitholwe khona
[mod] Igama elisha: iKey manje isiyiKey!
[mod] Isuse isidingo sokusebenzisa njengomsebenzisi ophethe, ngokuhambisana nezindlela zokuphepha zanamuhla.
[mod] Ithuthukise indlela i-yKey ephatha ngayo izinkinobho ezijwayelekile zewindi (njengokuvala, ukunciphisa, ukusondeza / isikrini esigcwele).
[mod] Hlanza izinto zemenyu yokubhalisa ngemuva kokubhalisa.
[mod] ukucushwa kwe-yKey manje sekulondolozwe futhi kwalayishwa kusuka endaweni ejwayelekile yohlelo. Ukucushwa kwangaphambilini kuthuthwe lapho kuqala le nguqulo entsha.
[mod] Okuncamelayo okwabiwe phakathi komhleli nenjini ye-yKey manje sekuhlelwe kangcono.
[mod] Ukuthuthuka okuningi kwangaphakathi nokwenziwa kwesimanje.
[mod] Kubuyekezwe ukusayinelwa kwekhodi kuzimfuneko zakamuva ze-Apple.
[okusha] Isicelo sokufaka njengento yokungena ngemvume manje ingacindezelwa uma ungafuni
ukwenza lokhu (usengashintsha umqondo wakho ngokuncamelayo).
[mod] Kukhishwe ezinye izixhumanisi zewebhu ezingasasebenzi (izikhathi ziyashintsha kanjalo newebhu iyashintsha).
[mod] Isuse isici esithi "lungiselela bonke abasebenzisi". Futhi, ukuvula uhlelo lokwabelana ngolwazi lokumiswa phakathi kwabasebenzisi abaningi akuseyona inqubo eyamukelekayo ezweni lesimanje eliqaphela ukuphepha. Ukucushwa kungabiwa ngokukhipha nokungenisa, kepha sonke siyathanda ukwenza ukulungiselelwa kwethu kube ngokwakho, akunjalo?
[mod] Kususwe ukusekelwa komhleli kokuvuka okuzenzakalelayo ngemuva kokulala. I-OS X ayikakusekeli lokhu kusukela nge-OS X 10.5.
[mod] Kususwe ukwesekwa kokuguqula izintandokazi ze-iKey v1 kusukela i-v1 ithathelwe indawo eminyakeni eyishumi edlule.
[mod] Kususwe ukwesekwa kwesipele senkonzo ye-Mac "ukukhethwa okusheshayo" ngoba i-Apple isithathe umhlalaphansi isevisi ye-Mac.
Isicelo esisha esisayiniwe sonjiniyela, ilabhulali nezinhlaka.
[Kubuyekezwe] Hlanza isisekelo sekhodi (izingcingo ezingathuthukiswa zamafa nemilayezo yokungena emincane) futhi kususwe ikhodi engasetshenziswanga / endala.
[Kubuyekezwe] Manje yazisa ekuqaleni ukunikeza iKey ukufinyelela kwezokuphepha -> Ubumfihlo -> Ukufinyeleleka ukuyivumela ukuthi ilawule ikhompyutha yakho. - Izibuyekezo eziningi nezici ezintsha ezizayo. - Siyabonga kubo bonke abasebenzisi ngempendulo.
[Engeza] - ukwesekwa nokuhlanganiswa ne-KeyCue (ergonis.com)
[Faka] - ukungena kwe-log uma i-keyCue ingasebenzi.
[Lungisa] - izimbungulu ezihlanganisiwe ukulungiselela ukukhishwa okukhulu okuzayo.
[Kubuyekezwe] - indawo yefayela lomgqomo kusuka kusoftware yeskripthi kuya kusayithi leplamu.
[fix] ukhiye oshisayo wesikhombisi awuzange ubonise kahle ngo-10.5.8 ngenkathi usebenza ku-64bit.
[fix] ilungiswe ngokuziphatha okusha kwe-mac os ngakho-ke ama-32bit asebenza kahle nangokuzenzakalelayo ku-pre 10.6 naku-64bit ka-10.6 nangaphezulu nawo asebenza kahle.
[mod] I-Bug: Yeka Okunye - Injini ye-iKey Ebulewe. Ukushintsha kokuziphatha: inothi kuphela kwendlela yokuyeka injini ye-iKey ukuyiyeka ngokusobala. Yeka Okunye akuyeki ukusetshenziswa: Yilethe ngaphambili bese uyiyeka Phambili, noma uyeke iKey.ap. Uma udinga ukunika amandla ukulandelwa kwenketho ye-Quit ku-plugin Ukuze unike amandla uhlobo lokugcina: okuzenzakalelayo bhala com.scriptsoftware.ikey debugTracePluginEng 1 Ukukhubaza ngohlobo lwe-terminal: okuzenzakalelayo bhala com.scriptsoftware.ikey debugTracePluginEng 0
[mod] Kungezwe ukufunwa kwe-USB ukuthola ukwesekwa okunwetshiwe kweXKey entsha (idivaysi ethile ye-usb enezinkinobho eziningi, izinti zenjabulo, i-jog ne-shuttle) amadivayisi. Imininingwane yabasebenzisi be-xkey entsha futhi abadinga lokhu: ukunika amandla kulayini womyalo faka: okuzenzakalelayo bhala com.scriptsoftware.ikeyeditor debugTraceUSB 1 Bese uthumela izingodo ze-iKey Editor ukuyixhasa.
[lungisa] izicelo zakamuva nemibhalo kuyasebenza
[mod] isebenza nabaqaphi abaningi. ingahambisa amawindi endaweni engeyinhle. Abaqaphi abangakwesobunxele babhekwa njengabanegethivu.
[mod] ukufaka akusavuleki imanuwali ekugcineni kokufakwa.
inguqulo ye- [fix] 2.4.3 ayivulelanga abasebenzisi abasha. lolu daba olusha lwe-prefs lulungisiwe.
[mod] iguqule imenyu yosizo lomhleli ukuba ithi: IKey Website ...
[mod] kususwe umyalezo welog: uthe runActions: resutls Impumelelo: 0 Fail: x
[lungisa] Ukupela okulungisiwe nempendulo ethuthukisiwe yezikhiye zokubhalisa ezihlulekile.
[mod] ukufaka manje kukuvumela ukuthi ukhethe indawo yangokwezifiso.
[mod] ibhukwana lokusetha ukuvumela ukubonisa okungaguquki nobubanzi obuhlukahlukene
[engeza] isuswe ku-skripoftoftware.com endala yaya kuwebhusayithi entsha, igama elisha kusizinda esisha> iplamu emangalisayo
[mod] isuse inketho yokugunyaza kumenyu yefayela yomhleli ngezizathu zokuphepha. inothi: lokhu kuthinta inketho ye-Wake from Sleep kuphela uma unika amandla ukwesekwa kwedivayisi okufinyelelekayo. sleep umyalo ongenanketho yokuvuka kusasebenza.
[mod] Umyalo wesistimu - ukuqala / ukumisa okwakudala manje kukhutshaziwe ngo-64 bit ngo-10.6
[mod] i-pref ayilondolozanga uma ucindezela inkinobho ebomvu yokuvala - ikhubaze
Isikrini sokwamukela [mod] sinokuxhumanisa ne-PDF ku-Key.app idinga ukuvuselela nokususa i-PDF
[mod] impendulo ye-imeyili manje ibika ukuthi "Ngisebenzisa iKey 2.4.0 ngaphansi kwe-Mac OS X 10.6.2 (Intel 64)."
[mod] Kungezwe okuzenzakalelayo komsebenzisi kohlaka lomhleli we-Action "IKActionDebug" yokuhlela izenzo zokungena ngemvume.
[fix] Ayikwazanga ukuthola isithombe esibizwa ngokuthi 'isikhombisi'.
[engeza] Object C 2.0 ukubala okusheshayo okusetshenziselwa ukusheshisa izinto
[engeza] Izinketho zefolda evulekile efakiwe kumiyalo yeFolda ..
[engeza] Imenyu entsha ezenzakalelayo ye-Ikey
[lungisa] ifa lendlalifa ukukhiya kulungisiwe.
[fix] Fix: iKey Editor Console *** ISEXWAYISO: Indlela setDrawsGrid: ekilasini iStripedTableView yehlisiwe. Izosuswa ekukhishweni okuzayo futhi akufanele isasetshenziswa.
[fix] Fixed: Umyalo wenethiwekhi wokukhetha izindawo ku-10.6.x
[mod] Ibuyekeze i-Mount server ukuhlanza inkinga, manje isebenzisa i-UTF8 ukwesekwa emazweni.
[mod] amathiphu wamathuluzi angaxutshiwe we-Run in Terminal and Edit.
[mod] umyalo we-unix manje ubuyisela "iphutha lokubuya lomyalo we-unix #" uma kuvela iphutha.
[engeza] Ithiphu yamathuluzi angeziwe kumenyu uma kuphela isithonjana sibonisiwe.
[lungisa] umsindo olungisiwe phezulu, phansi bese uyisimungulu. Manje kuyasebenza ngaphandle kohlobo lwekhibhodi.
[engeza] Faka umyalo we-Sound-> Max Volume. Setha ivolumu ibe yinani leMax.
[mod] unix - run file - edit ayikutsheli ukuthi yimuphi umhleli
[mod] kulungisiwe ukususa noma ukungeza isithombe / isihloko kumamenyu.
[fix] iphutha elungisiwe kwakuyizenzo ezi-2 ezifanayo kwimenyu noma i-pallete ayangezi.
[mod] umyalezo welog ususiwe: runActions: resutls Impumelelo: 0 Ukwehluleka: 6
[Faka] Ama-64 bit Ngokugcwele afaka wonke amamojula lapho usebenzisa i-10.6. Lokhu kusho ukuthi izogijima ngokushesha futhi isebenzise inkumbulo encane.
[Mod] Kukhishwe ikhodi eyehlisiwe.
[Engeza] Imodyuli entsha yokulawula kalula i-iClock.
[Mod] idokhumenti yakamuva nezinguquko zakamuva kuvalelwe le nguqulo (zizobonisa kodwa zikhutshaziwe)
[Mod] lokhu nezinguqulo ezizayo kusekela u-10.5 no-10.6 kepha akusekho u-10.4
Chofoza lapha ukuthola ibhukwana le-inthanethi.
Chofoza lapha ukuthola i-PDF ephelele yemanyuwali.
2.5.2 - Kudinga> Mac OS 10.6 & <Mac OS 10.10
2.3.4 - Idinga <Mac OS 10.5
yKey kushiwo ngo-00: 03: 5 kule podcast enkulu noDave Hamilton eMacObserver.
Uhlelo lokusebenza oluhle olunamathani wezinketho. Isitebele futhi. Ngemuva kokushiya ama-Quickkeys eminyakeni embalwa edlule, ngijabule kakhulu ngalokhu. - I-Beige ku-MacUpdate
Ngisebenza noFinale kakhulu, uhlelo olunamandla kakhulu kepha oluyinkimbinkimbi lokusetha kabusha nokwenza umculo weshidi. Uma ungumdlali wekhibhodi - engingeyona - ungadlala amanothi kumaphuzu ngekhibhodi ye-midi. Kepha thina sonke kufanele sifake amanothi ngesandla kusuka kuma-palettes noma kukhibhodi yekhompyutha. Manje uma ufaka izinketho ngamanothi wangempela - ngokungafani nezimpawu zamakholi kuphela - le yinqubo eyisicefe kakhulu edinga ukucindezelwa okhiye abaningi. Kepha ngeYKey kushaya umoya. Uvele wenze i-macro yakho, ucindezele inhlamvu, bese ubuka amanothi avela sengathi ngomlingo! I-yKey inyuse kakhulu umkhiqizo wami we-Finale. Kulula ukuyisebenzisa, futhi okwamanje, ngiyazibuza ukuthi ngiphile kanjani ngaphandle kwayo. - I-W-Pyper ku-MacUpdate
Ngizamile i-Keyboard Maestro, i-Spark ne-QuicKeys kepha akekho noyedwa kubo owenze lokho engikudinga ngendlela engifanele. iKey iyakwenza. - UmbalaGravity
Bengilokhu ngisebenzisa iKey iminyaka, kusukela ngaphambi kwe-UI entsha esabekayo. Ngikuthole ngokungaguquguquki ukuthi kungabi nasiphazamiso futhi kuzinze. Lapho uthola ingqondo yakho nge-UI, inqubo yangempela yokusetha izinqamuleli ayinzima. Ngokuphambene nalokho, ngikuthole kunembile impela. - SimiChavel
Uhlelo olusiza kakhulu. - Colette ku-MacUpdate